Ụzọ 12 maka Ọgbọ Afọ Ọhụrụ | Martech Zone
Wednesday, October 26, 2011 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 26, 2012 Douglas Karr
Anyị nwere webinar dị ịtụnanya ụnyaahụ na PR Newswire na Zoomerang, ihe karịrị mmadụ 1,600 debanyere aha !!! Webinar bụ njikọ webinar na John O'Connell, a PR na Communications ndụmọdụ si HNTB.
Emeziwo m ihe ngosi m n'ime usoro enyi maka nkesa ebe a:
12zọ iri abụọ na abụọ maka Ọdịnaya Ọdịnaya Ọdịnaya:
Ghọta nke nzube nke ndị ọbịa gị.
Kwụsị ire na nye uru ndị na-agụ akwụkwọ gị kama.
Chọpụta ihe ndị ahịa gị na atụmanya gị chọrọ!
Nye uche gịederede, odiyo, vidiyo na mkparita uka.
Mee nyocha na ntuli aka isi usoro.
Nyefee otu ozi ahụ ụzọ dị iche iche site na nke ọ bụla ọhụụ ọhụrụ.
Na-akwalite onye ọ bụla n’ime ndị na-ajụ ndị mmụọ ase n’aka ibe ya.
Bido ọkụ ọdịnaya! Malite iji Infographics.
Kwado na kwalite mmekọrịta mmadụ na ibe yaTinye bọtịnụ mmekọrịta!
Kpachara anya ma chụọ nta ndị ọhụrụ site na ịkwalite ọdịnaya gị.
Tụọ nsonaazụ ya ma jiri ihe kacha arụ ọrụ.
Mbilite n'ọnwụ ochie ọdịnaya ma jiri ya ma weghachite ya!
Ọ bụ webinar mara mma nke nwere nnukwu mgbanwe. Odi ka odi ihe onye obula n’obi n’oge ugbua! Enwere m olileanya na nnweta nke ihe ngosi ahụ bụ na iji ntuli aka na nyocha eme ihe n'ụzọ dị irè, yana ịkwalite ọdịnaya gị site na ngwaọrụ dị ka PR, na iji ọdịnaya gị na-ajụ ase dị ka infographics bụ isi ihe dị ukwuu maka usoro ọdịnaya!